को’रोनाले एकै घरका दाजुभाइको चार दिनको फरकमा नि’धन ! | समाज
June 3, 2021 NepstokLeaveaComment on को’रोनाले एकै घरका दाजुभाइको चार दिनको फरकमा नि’धन !
उदयपुर : चार दिनको फरकमा उदयपुरमा को’रो ना सं’क्रमणले एकै परिवारका दुई दाजुभाइको ज्या’न ग’एको छ। योसँगै उदयपुरमा कोरोनाबाट मृ,त्यु हुनेको संख्या ३५ पुगेको छ। रौतामाई गाउँपालिका ७ मुर्कुचीका ५० वर्षीय पुस्कल मस्राङ्गी मगर, ४५ वर्षीय तुलबहादुर मस्राङ्गी मगरको चार दिनको फरकमा ज्या’न ग’एको हो । पुस्कल परिवारका जेठो छोरा हुन् भने तुलबहादुर साइलो हुन् ।
श्वासप्रश्वासमा समस्या देखिएपछि पुस्कललाई विराटनगरस्थित नोवेल शिक्षण अस्पताल र तुलबहादुरलाई विराट मेडिकल कलेजमा उपचार भएको थियो । उपचार कै क्रममा १५ गते राति तुलबहादुरको ज्या’न ग’एको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख मोहन सुवेदीले जानकारी दिए । उनको श,व १६ गते गाउँमै ल्याएर व्यवस्थापन गरिएको थियो ।
परिवारको सदस्यको मृ,त्युपछि का’जकिरिया सुरु भएको तेश्रो दिन जेठ १८ गते जेठो दाजु पुस्कलको पनि नोवेल अस्पतालमा मृ,त्यु भएको सुवेदीले जानकारी दिए । स्थायी घर रौतामाई ७ मुर्कची भएर त्रियुगा नगरपालिका ११ गाईघाटमा बस्दै आएका तुलबहादुर को श्रीमती, एक छोरा र दुई छोरी छन् भने मुर्कुची बस्दै आएका पुस्कलका श्रीमती, एक छोरा र तीन छोरी छन् । अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ ।उदयपुर : चार दिनको फरकमा उदयपुरमा को’रो ना सं’क्रमणले एकै परिवारका दुई दाजुभाइको ज्या’न ग’एको छ। योसँगै उदयपुरमा कोरोनाबाट मृ,त्यु हुनेको संख्या ३५ पुगेको छ। रौतामाई गाउँपालिका ७ मुर्कुचीका ५० वर्षीय पुस्कल मस्राङ्गी मगर, ४५ वर्षीय तुलबहादुर मस्राङ्गी मगरको चार दिनको फरकमा ज्या’न ग’एको हो । पुस्कल परिवारका जेठो छोरा हुन् भने तुलबहादुर साइलो हुन् ।
परिवारको सदस्यको मृ,त्युपछि का’जकिरिया सुरु भएको तेश्रो दिन जेठ १८ गते जेठो दाजु पुस्कलको पनि नोवेल अस्पतालमा मृ,त्यु भएको सुवेदीले जानकारी दिए । स्थायी घर रौतामाई ७ मुर्कची भएर त्रियुगा नगरपालिका ११ गाईघाटमा बस्दै आएका तुलबहादुर को श्रीमती, एक छोरा र दुई छोरी छन् भने मुर्कुची बस्दै आएका पुस्कलका श्रीमती, एक छोरा र तीन छोरी छन् । अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ ।
भक्त’पुरमा आफ्नै दाजु बाट ७ बर्षिय बहिनि ब’लाकृ’त